नोकर ले मालिक लाई कुट्यो ??? पुलिसलाई 'नहेप्नुस्' भन्दा थुनिनुपर्ने ? प्रहरी प्रमुखलाई प्रश्न | Jukson
काठमाडौ, असार २१ - आईतबार अपरान्ह मीनभवनमा एक हुल प्रहरीले एक युवालाई बल प्रयोग गरेर नियन्त्रणमा लिन खोज्दै थिए । ती युवा को हुन् र किन समातिए भन्ने कुरा त्यतिखेर प्रहरीले बताउन चाहेन । पछि उनलाई प्रहरीले गिरफ्तार गरेको फोटो र भिडियो सार्वजनिक भए । प्रहरीले आफूलाई गिरफ्तार गर्नुको कारण र घटनाबारे २८ वर्षिय अमितले सोमबार बताए :
त्यसैबेला एकजना ट्राफिक प्रहरी निरीक्षकले पछाडिबाट एकदमै रुखो (तँ, ओए जस्ता) शब्द प्रयोग गर्दै मलाई बाटो काट्नबाट रोके । म फर्किएँ र उनले प्रयोग गरेको शैली र शब्दको प्रतिवाद गरेँ । त्यहाँ मीनभवनमा वृद्ध/वृद्धाको धर्नाले ट्राफिक जाम हुने भएकाले उनले बाटो काट्न रोक्न खोजेका थिए । तर, उनको शैली एकदमै असभ्य थियो ।
मैले प्रतिवाद गर्दा उनले हात उठाउन खोजेझैं गरे । केहीबेरको प्रतिवादपछि मैले उनलाई इग्नोर गर्न खोजें तर त्यसले उनको ‘इगा’ेमा धक्का पुग्न गएछ । ‘नटेरेको नसुनेको’ भन्दै उनले त्यहीँ धर्नास्थलमा ड्युटी खटिएका प्रहरी बोलाए । मलाई ५/७ जना प्रहरीले जर्बजस्ती लछार पछार र कुटपिट गर्दै हत्कडी लगाएर भ्यानमा हाले । उनीहरुको जथाभावी प्रहार मेरो अण्डकोषमा पनि पर्न गयो । लाग्दैथ्यो, कुनै ठूलै अपराधीको रुपमा मलाई समातिएको हो ।
मलाई चौकीमा लगे पनि थुनेको थिएन । हत्कडी लगाएर राखिएको थियो । मैले फोन गर्छु भनेपछि हत्कडी खोलिदिए । मैले दाईलाई फोन गरेर बोलाएँ । दाईको रोहबरमा मलाई छाडियो । कागजमा ट्राफिक प्रहरीसँगको ‘मिस बिहेब’ को आरोप लगाइएको छ । ४/५ घण्टापछि मलाई छोडियो ।
–प्रहरीको हेपहा शब्द र हेपहा प्रवृतिको बिरोध गर्नु के अपराध हो ?
–प्रहरीको नियम कानुनमा सम्झाउनु भन्ने शब्द छ कि छैन ?–हामी पढेलेखेकालाई प्रहरीको यस्तो व्यवहार छ भने कमजोर मानिसलाई झन् कस्तो होला ?
–कसैलाई नियन्त्रणमा लिने प्रक्रिया केही छ कि ? जबरजस्ती र लछार–पछार नै हो ?
- Amit Pokhrel
प्रवासीद्वारा धाइरिङ लस्तीका बाढीपीडितलाई घर निर्माण